फार्मेसी टेकहरूले फार्मासिष्टलाई कसरी मद्दत गर्छन्? Pharma फार्मेसी टेक्निशियन कर्तव्य - चेकआउट | अगस्ट 2021
कल्याण घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण चेकआउट समाचार कम्पनी, समाचार समुदाय समुदाय, कम्पनी प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> चेकआउट >> किन फार्मेसी टेकहरू प्रत्येक फार्मेसीको लागि आवश्यक छन्
किन फार्मेसी टेकहरू प्रत्येक फार्मेसीको लागि आवश्यक छन्
म फार्मासिस्टको रूपमा मेरो पहिलो दिन कहिल्यै बिर्सिने छैन। केही दिनको नोकरी प्रशिक्षणको आँधीबेहरी पछि मलाई ब्वाँसोहरूमा फ्याँकियो ठूलो सा chain्लोमा स्टाफ फार्मासिष्टको रूपमा। मैले घोराही गरी फार्मेसी खोल्दा, मैले स्टोर म्यानेजरलाई भेट्टाएँ। मैले आफूलाई परिचय दिएँ र सोधेँ, मेरा टेकहरू यहाँ कहिले आउँछन्? ऊ हाँसे र उत्तर दियो कि त्यस स्टोरमा कुनै फार्मेसी टेक्नीशियन थिएनन्। यो प्रविधीहरूको आवश्यकताको लागि पर्याप्त व्यस्त थिएन।
अन्तत: मैले आफैं गर्न सिकें, तर मलाई केहि हराएको थियो भनेर थाहा थियो। मेरो अर्को फार्मेसीमा, जब हामीसँग इजाजतपत्र प्राप्त फार्मासिष्टहरू र फार्मेसी टेक्निशियनहरूको सम्पूर्ण परिवार थियो, मैले सिकें कि जीवन टेकहरूको साथ पूर्ण रूपमा भिन्न छ। यो एक मिलियन गुणा राम्रो थियो!
बदाम बटर र जेली, कुकिज र दूध, नुन र कालो मिर्च - केहि चीजहरू सँगै राम्रो छन्। त्यस्तै, फार्मासिष्टहरू र टेकहरू एक विजयी संयोजन हो। टोलीको बारेमा भनाइ सही छ: सँगै, सबैले अधिक प्राप्त गर्दछ।
Pharma फार्मेसी टेक्निशियन कर्तव्य
यहाँ फार्मेसी टेक्निशियनको केहि कर्तव्यहरू छन् जुन फार्मेसीलाई अझ सजीलो रूपमा चलाउन मद्दत गर्दछ:
कसरी खमीर को शरीर हटाउने
१. बिरामीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुहोस्
सामान्यतया, प्रविधि फार्मसीमा बिरामीले सामना गर्ने पहिलो व्यक्ति हो। एक पेशेवर, मैत्री टेक बिरामीको अनुभव अझ राम्रो बनाउन सक्छ, र क्लिनिकल मुद्दाहरू र प्रमाणिकरण प्रमाणिकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्न फार्मासिष्टलाई स्वतन्त्र।
२. उत्तर फोनहरू
जब फोनहरू हुकबाट घण्टी बजाउँदै छन्, प्रविधिहरूले फोन कललाई ट्रिज गर्न मद्दत गर्दछ, जसले फार्मासिष्टहरूलाई कम रुकावटसहित औषधि आदेशहरू प्रमाणित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
Drop. ड्रप अफ प्रबन्ध गर्नुहोस्
टेकहरूले नुस्खा ब्यवस्थापन गर्छन् जसरी उनीहरु भित्र आउँदछन् (चाहे बिरामीहरु द्वारा व्यक्तिगत रूपमा छोडिन्छ वा हेल्थकेयर प्रदायकहरु द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूपमा पठाईन्छ) समस्या समाधान गर्न र बीमा कम्पनीहरु लाई सम्पर्क गरेर अस्वीकृतिहरूको ख्याल राख्दै।
Pick. पिकअप ह्यान्डल गर्नुहोस्
टेकहरूले पिकअप-अप विन्डोमा बिरामीहरूको स्याहार प्रदान गर्न जारी राख्छन् जबकि बिरामीहरूलाई नगद दर्तामा घण्टी दिँदै र खुशीसाथ उनीहरूको मार्गमा पठाउँदै।
प्राविधिकहरूको एक ठूलो टोलीले सकरात्मक र उत्पादक कार्य वातावरण कायम गर्न मद्दत गर्दछ। यसले बिरामीहरूलाई खुसी राख्छ र टीमलाई कम तनावग्रस्त राख्छ।
सम्बन्धित: फार्मासिष्ट बर्नआउटबाट कसरी बच्ने
काउन्टर मा सबै भन्दा राम्रो चिसो औषधि
जब मसँग टेकहरूको सम्पूर्ण टिम थियो, हामी एक उत्तम असेंब्ली लाइन थियौं। हामीले एक टीमको रूपमा काम गरेका छौं। हामीले एक अर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्यौं। यदि हामी मध्ये कसैले अरूलाई सहयोगको आवश्यक देखेको खण्डमा हामी तुरुन्तै चाहिएको ठाउँमा जान्छौं।
जब यो जहाज डुब्दै छ जस्तो लाग्यो, हामी एक सानो छिटो hustled र समात्यौं। मैले कहिल्यै एक्लोपन वा निराश महसुस गरेन, जस्तै मैले टेक्नीशियनविना फार्मेसीमा काम गर्दा गरेको थिएँ। मलाई थाहा थियो कि टोलीको रूपमा हामी एक साथ मिलेर काम गर्ने छौं।
कुन जन्म नियन्त्रण तौल घटाउन को लागी उत्तम हो
तपाईले अहिले भन्न सक्नुहुन्छ, फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम पूरा गर्नु वा फार्मेसी टेक्निशियन सर्टिफिकेसन परीक्षा पास गर्नु भन्दा पनि फार्मेसी टेक्निशियनको कामको विवरणमा अरू धेरै कुरा छन्। तपाईंले काम गर्ने फार्मेसी सेटि onमा निर्भर गर्दै, तपाईंको काम कर्तव्यहरू प्रशासनिक कार्यहरू साथै ग्राहक सेवा कौशल, सञ्चार कौशल, र संगठनात्मक सीप समावेश गर्दछ। यो एक प्रमाणित फार्मेसी टेक्निशियन हुन के लिन्छ बारे अधिक जान्नुहोस् यहाँ ।
सम्बन्धित: फार्मेसी क्षेत्रमा कसरी पुग्ने
प्राविधिकहरू मनाउन नबिर्सनुहोस्
फार्मासिष्टहरूले टेक्न नगरी हामी के गर्न सक्दैनौं। अक्टुबर २० मा, यो राष्ट्रीय फार्मेसी टेक्निसियन दिवस हो। हाम्रो फार्मेसीहरूको मेरुदण्ड रहेकाहरू सबै शानदार टेक्निशियनहरूलाई धन्यवाद भन्नका लागि यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
कहिलेकाँही हाम्रो अराजकमा हामी रोक्न र आफ्नो कदर व्यक्त गर्न बिर्सन्छौं। फार्मासिष्टहरू, फार्मेसीको सबै हलचलमा, कृपया यस वर्ष आफ्नो टेक्नीशियनहरू मनाउन समय लिनुहोस्!
तपाईको टोलीलाई मनाउन तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो फार्मासिष्टमा सम्मिलित हुनुहोस् फेसबुक समूह र तपाइँको कथा साझा गर्नुहोस्!
एकलकेयर प्रयोगकर्ताहरू के भनिरहेका छन् हेर्नुहोस् र बचत गर्दै
एलर्जी को लागी सबै भन्दा राम्रो कुरा के हो
क्लेरीटिन गैर ड्रोसीले तपाईंलाई निन्द्रा बनाउँदछ
कहिलेसम्म विस्तार जारी जारी vyvanse हुन्छ
रगत ग्लुकोज खाए पछि के हुनु पर्छ
म कसरी कानको संक्रमणबाट छुटकारा पाउन सक्छु